Kanto ankehitriny : Fampirantiana etsy amin’ny IFM -
AccueilVaovao SamihafaKanto ankehitriny : Fampirantiana etsy amin’ny IFM
13/09/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nanomboka ny alatsinainy teo ary tsy hifarana raha-tsy ny 20 oktobra izao. Tanterahina etsy amin’ny « Institut Français de Madagascar » na ny IFM etsy Analakely ny fampirantiana ireo kanto ankehitriny hiarahana amin’ny mpanakanto manodidina ny 30. « Ici la limite du Royaume est la Mer », izay azo adika avy amin’ilay tenin’Andrianampoinimerina hoe « Ny ranomasina ny valamparihiko » no lohahevitry ny fampirantiana, ary ahitana ireo kanto ankehitriny nisongadina tato anatin’ny 20 taona. Nofantenan’i Rina Ralay-Ranaivo, izay niandraikitra ny fifantenana ny sangan’asan’ireo mpanakanto malagasy avy amin’ny sehatra maro, na ireo mbola velona, na ireo efa nodimandry. Hita ao anatin’ireo sangan’asa ireo ny sary hosodoko, ny saripika, ny famoronana lamaody, ny sarimihetsika, ny asa soratra… « Tanjon’ny hetsika araka izany ny famohazana ireo tsiahy ara-tantara iraisana, ary hanehoana fa isan’ireo mpiambina sy vavolombelon’ny tantara ny fanehoana ny sangan’asa amin’ireo kanto ankehitriny », araka ny fanamarihan’i Rina Ralay-Ranaivo.
Ho hita mandritra ny fampirantiana araka izany ny sangan’asan’ireo mpanakanto maro toa an-dry Chan – Jean-Yves Chen – Mamy Rajoelisolo – Vonjiniaina – Donn -Emile Rakotondrazaka – Maksim Seth – Pierrot Men – Rijasolo – Christian Sanna – Madame Zo – Joël Andrianomearisoa – Esther Nirina – Elie Rajaonarison – Michèle Rakotoson – Jean-Luc Raharimanana – Môssieur Njo – Jean Loup Pivin – Ariry Andriamoratsiresy – Rudi Rehava – Harivola Rakotondrasoa – Ketaka Razafimisa – Ludovic Randriamanantsoa – Jiva Eric Razafindralambo – Créateurs-Créatures – Revue Noire à Tanà …
Miainga amin’ny lohahevitra hoe « ao anatin’ny kanto ankehitriny » kosa ny adihevitra momba ny zava-kanto ankehitriny ka nanasana vahiny manokana : moïse Touré sy Chab Touré. Adihevitra hotanterahina ny alarobia 19 septambra izao amin’ny 2 ora sy sasany etsy amin’ny Ifm analakely ihany.